Doorashada Somaliland: Saadaashu ma Waddani mise Kulmiye? – Radio Daljir
Noofember 13, 2017 6:15 g 5
Doorashadii Somaliland ee dhowrka jeer dib-u-dhacdey waa la codeeyey, waxaana hadda bilaabatay saadaasha musharraxa ku guuleysaneya xilka Madaxweyne ee Somaliland.
Cidina caad kama saarna in labada xisbi ee Kulmiye iyo Wadani uu midkood guusha helayo, halka uu rajabeel ka yahay xisbiga UCID iyo Faysal Cali Waraabe.
Siyaasiga iyo waliba shakhsiga caadiga ee dersa siyaasadda Somaliland iyo qaab-dhismeedka xisbiyadu waxaa u baxaya in xisbiyadu ay yihiin xisbiyo beeleedyo oo saddexda xisbiba ay yihiin xisbiyada Beesha Dhexe, guushuna ay tahay mid ku xiran hadba qabiilka beesha dhexe ee u tanaasulaya qabiilka kale ee isla beesha dhexe.
Haddii aan yara dib-u-jaleecno doorashadii sannadkii 2010 ee Xisbiga Kulmiye ku hantay madaxtinimada Somaliland, waxaa sabab u ahaa xulufeysigii beelaha Habar Jeclo iyo Habar Awal, ayada oo lagu heshiiyey in Siilaanyo kabacdi uu hoggaanka Xisbiga Kulmiye qaban doono Muuse Biixi oo ka soojeeda beesha Habar Awal, saldhigooduna yahay Galbeedka Somaliland. Xulufeygsigii labadaas beelood waa kaas suurtgaliyey in guushu raacdo Kulmiye, isla markaasna suurtagaliyey waqti korarsi Siilaanyo Madaxweyne ku yahay 7 sano.
Waqti-kororsiga Siilaanyo asna cilladihiisa waa uu lahaa, waana kan abuuray khilaaf xooggan oo soo kala dhexgaley Xisbiga Kulmiye sannadihii 2014, siina xoogeystey sannadkii 2015, abuureyna kala-dhantaalan Xisbiga Kulmiye. Kala-dhantaalanka Xisbiga waxaa badanaa lagu eedeeyaa Xirsi Gaab oo ahaa Wasiirka Madaxtooyada, sababeyna in siyaasiyiin badan oo Xirsi Gaab ku jiro ay u haajiraan dhanka Xisbiga Waddani.
Xisbiga Waddani oo ka faa’iideysanaya fursadda uu Xirsi Gaab suurtagaliyey waxa ay isla markiiba gacan u fidiyeen siyaasiyiintii ka baxay ama ka baxayey Kulmiye. Gudoomiye Cirro oo kaashanaya Xirsi Gaab waxaa u suurtagshay in la soo xerogaliyo Maxamed Biixi Yoonis iyo siyaasiin tunweyn ah oo kale, kuwaas oo miisaan weyn ku yeeshay Xisbiga Waddani, meesha labadii beelood ee gaashaanbuurta Kulmiye ay kala jajabeen.
Haddaan si kale u iraahdo, siyaasiyiinta beelaha Habar Jeclo waxa ay taageereen Waddani, meesha beesha Habar Yoonis ay iyadu xisbiga majaraha u haysey. Sidoo kale beesha galbeedka ee Habar Awal oo aan la dhacsaneyn siyaasadda Muuse Biixi qudheedu waa kala jabtay, oo Waddani halkaas fursad kale baa uga soo baxday.
Muuse Biixi oo dareemay in beeshe dhexe looga garab adkaaday, waxa uu miciin biday in uu cod ka raadsho gobolka Sanaag iyo Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan oo fadhigiisu yahay Hadaaftimo. Nasiibdarro iyo siyaasadxumo hadba kaa rabtid, Muuse Biixi oo dhowr jeer ku goodiyey in uu yahay “mujaahid” taariikh dheerna ku leh Sool iyo Sanaag, waxa uu sababay in Suldaan Siciid oo horay Hadaaftimo ugu casumay uuba deegaankii ka haajiro, joogtana ku noqdo Ceelbuh iyo deegaan aan cod jirin. Halkaas waxaa ku khasaaray codkii Sanaag ee Muuse Biixi tirsanayey. Dhanka Sool ama degmada Laascaanood ayana filitaan fiican uma laha Kulmiye, meesha cod kasta oo Waddani ka helaa u yahay Alle ku sii.
Si lamid ah Sool iyo Sanaag, gobolka Awdal asna ifafaalo fiican ugama muuqdaan Muuse Biixe, meesha Waddani khasaare kasta oo Kulmiye iyo Muuse Biixi la kulmaan uu u yahay Alle ku sii.
Hadaba saadaashu waa see?
Mar haddii aynu darisnay qaab-dhismeedka labada xisbi iyo qaabka beeluhu ay isu xulufaysteen, markaas waa suurtagal in si sahlan loo saadaasho qofka noqonaya Madaxweynaha Somaliland ee shanta sano ee soo socota. Sidaas darteed, saadaashu waa Guddoomiye Cirro iyo Xisbiga Waddani oo ay guusha si sahlan ku raaci doonto.
Saas oo ay tahay, hadana dadku waa Soomaali, siyaasaddu waa arxan darro, hungurigu ma yara, damaca warkiisa daa, laakiin intaas haddii xayndaabka lagu xidho, ama karka laga ilaasho, filo guul Waddani iyo Guddoomiye Cirro.
Abdi Jirde Isse 10 months
Maxamed Yuusuf 10 months
wadani diidow dilaac
Cabdi Axmed 10 months
Wadani baad moodaa inay ugu horayso ama farxadi ka muuqato
Siciid C'risaaq Qaaje 10 months